FAQs - Haining Chengda Machinary Co., Ltd.
Ho an'ny milina, ny fotoana itarihana dia manodidina ny 25-35 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Ny fotoana itarihana dia nanjary nahomby rehefa (1) nahazo ny petra-bolanao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao izahay. Raha tsy mandeha amin'ny fe-potoana farany ny fotoananay, azafady mba andefaso ny takiana amin'ny varotrao. Amin'ny tranga rehetra dia hiezaka izahay hanome izay ilainao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay, ary afaka manangona arakaraka ny fepetra manokana takinao. Ny fonosana matihanina sy ny takiana famonosana tsy mahazatra dia mety mitaky fiampangana fanampiny.